Bamangalela iNike yezizwe ngezizwe ngokusebenzisa isoftware ebunjiwe | Izindaba zamagajethi
Bamangalela iNike yamazwe omhlaba ngokusebenzisa isoftware ethandwayo
U-Ignacio Sala | | Ukuphanga
Lapha akusindiswa muntu. Ukuthi babamba amazwe omhlaba wonke aphishekela ukwenza umkhiqizo wawo ngomgunyathi emhlabeni wonke, ukusebenzisa isoftware ebunjiwe ukugwema ukukhokha ilayisense ehambisanayo kubonakala njengehlaya empeleni okungelona. I-Quest, okuyinkampani eye yamangalela iNike, iyinkampani ezinikele ekwenzeni imininingwane yolwazi ngabaphathi bayo efwini futhi igxile kwezamabhizinisi.
Ngemuva kokwenza ucwaningomabhuku, i-Quest ingaqinisekisa ukuthi ezamazwe ngamazwe zisebenza kanjani basebenzise isoftware yabo ngokungemthetho, sisebenzisa ama-password enza i-Internet azungeza i-Inthanethi futhi atholakala kuwo wonke umuntu. Yize ngomusa inkampani icele iNike ukuthi isijwayele lesi simo, yenqaba. Isixazululo: icala.
AbakwaNike baqasha izinsizakalo zikaQuest ngo-2001, futhi kusukela lapho, abakhiqizi bezingubo zezemidlalo nezingubo bebelokhu bethenga uchungechunge lwamalayisense enkampanini yokusebenzisa insiza yalo. Kepha ngemuva kokucwaningwa okwenziwe yinkampani, ngiyakubona lokho inani elikhulu lamaqembu bebesebenzisa i-generator esemqoka ukwenza kusebenze izinsiza ezinikezwa yi-Quest kumakhasimende ayo efwini.
Enkantolo, i-Quest imangalela uNike kwephula amalungelo empahla yengqondo ngaphezu kokwephula isivumelwano abafinyelela kuso ngo-2001 ngesikhathi beqala ukusebenzisana. Njengoba kulindelwe, i-Quest ayiceli nje kuphela isinxephezelo sezezimali, kodwa futhi idinga ukuthi wonke amakhompyutha anenguqulo ephangiwe ye-Quest afakwe ngokusemthethweni ilayisense lawo.
UNike akazange aphawule ngalolu dabaNgokunokwenzeka, bazobe belungiselela isitatimende sokuzama ukuchaza ukuthi bazisebenzisa kanjani izicelo ezigwetshiwe, ngaleyo ndlela bakhuthaze ubuqili lapho imikhiqizo yabo ingumbombayi kakhulu emhlabeni futhi unyaka nonyaka basebenzisa amakhulu ezigidi zamadola ukuvikela amakhophi emikhiqizo yabo. finyelela ezimakethe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Bamangalela iNike yamazwe omhlaba ngokusebenzisa isoftware ethandwayo
I-Alexa izoqala ukuba nenkumbulo yayo